Maxkamadihii oo Madaxtooyada Degeya iyo Madaxweynihii iyo Wafdigiisii ( Cabdi Qeydiid iyo Xasueen Caydiid) oo ka Degay Gaalkacyo....
Ilaahay wuxuu Qur’aanka ku leeyahay haddaan Afsoomaali ahaan ku cabbirno: Dheh Ilaahayoow waxaad tahay Mulkiilaha mulkiga; waxaad mulkiga siisaa ciddaad doontoo; waxaad ka qaaddaa ciddaad doonto; waxaad ciseysaa ciddaad doontoo; waxaad dulleysaa ciddaad doonto; kheyrku gacantaaduu ku jiraa; Adiguna wax kasta waad awooddaa. Ileyn Mele Zenawi awood ma lahee waxaa maanta indhaheennu qabteen in Ilaahay Xamar gacanta u gashay dad aan laga fileyn halka madaxweynihii ay soo dhoodhoobeen cadowgii Soomaaliya uu Mudug ka degay isagoo gacantiisa midig uu socdo Cabdi Qeybdiid! Sidoo kale waxaa weheliyey Xuseen Caydiid. Cabdi Qeybdiid waa ninkii boqollaal qof ku dilay Gaalkacyo kuna guray ceelasha. Sidoo kale wuxuu dad deegaankaas u dhashay kusoo xasuuqay Kismaayo. Wuxuu dad badan ku laayey Waqooyiga Xamar. Xitaa waxaa loo heystaa dilkii janankii Ceydiid. Sidee ku dhicikartaa in dumarkii uu raggoodii laayey iyo carruurtii uu aabbahood dilay ay Waqooyiga Gaalkacyo ku soo dhoweeyaan? Haddayba Gaalkacyo kusoo dhoweynayaan, maxay jaaliyadda Waqooyiga Gaalkacyo ka soo jeedda ay dacwadda ugu soo oogeysay Cabdi Qeybdiid markuu Sweden tagay? Mise mar haddii dilaa C/hi hoosta ku wato lalama hadlikaro? Marka ninkaad Sweden ka raadineyseen hadduu Gaalkacyo iyo Garoowe idiin tagay. Waxaanan la yaabeyn waxaaba dhicikarta in kuwii shalay dacwadda ku furayey ayba lacag u diraan Cabdi Qeybdiid iyagoo leh: wuxuu la dagaalayaa Cayr iyo Cabdi-qaasim! Sidee suurtogal ku tahay iney soo dhoweeyaan qabiilkiisii uu intaas oo dhib geshay inuu maanta ku dhaho kaalaya aan la dagaalno qabiilka Cayr?
Korneyl C/hi wuxuu horay usoo laayey wiilashii mutacallimiinta ahaa ee maanta u istaagilahaa Puntland. Dilkaas dartiis ayaa darajo lagu siiyey oo uu noqday madaxweynaha Puntland. Markii seddexdii sano u dhammaatay ayaa waxaa xukunkii ku qabsaday kuwii awal ku caawiyey iney wiilashooda laayaan. Laakiin iyagiina wuxuu ka laayey wiilashooda. Imisa nin baa Qardho, Qayaadsame iyo Dhuudo lagu laayey? Markuu mar labaad xasuuq sameeyey ayaa dad badan oo reer Puntland ah waxaa caado u ah in qofkii wax dila, abaalmarin la siiyo. Markii dambe waxay ugu abaalgudeen in isaga keligiis soo xulo ergada Puntland uga qeybgaleysay shirkii Mbagathi sidoo kalna uu xulo xildhibaannada ka soo gelaya degaankaas. Waxay gaareen heer aan laga dabohadlin go’aan kuu gaaro. Waxaan mar hore shacbka Puntand u sheegay iney ka reebtaan wiilashooda Bay iyo Bakool loo soo wado. Waxaan uga digay in wiilashaas lagu soo khalday waxaad waardiyeyndoontaan madaxtooyada, dekedda iyo garoonka weyn markuu korneylku Xamar qabsado runta loo sheego! Marka wiilashu ma hayaan wixii lagu yiri?
Waxaa la sheegaa in wax walba wareegaan oo marka dambe ku noqdaan meeshay ka soo bilaabmeen. Sidaad la socotaan, mar horana aan wax ka iri, Baydhabo waxay leedahay taariikh caan ah. Waa meeshii korneyl C/hi isagoo heysta ciidan ka badan kii Xamar markaas joogay uu ka cararay oo uu Kenya iyo Itoobiya u galay. Markaas wuxuu ku jiray madaxdii qeybtii 60-naad ee ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed. Maalintaas wuxuu heystay ciidan ka badan inta Xamar joogta. Xitaa korneyl Cirro oo inqilaabka horboodayey wuxuu askartii ku dagaalgeshay waxaa nasoo weeraray ciidamo Itoobiya iyo Ruush leeyihiin. Cirro, ugu yaraan wuxuu gartay in Soomaalidu necebtahay cadowga Itoobiya halka uu korneylku weli fahmi la’yahay qaddiyadaas; wuxuuba na barayaa in Itoobiya ay Soomaaliya xal iyo wanaag la rabto!
Qabsashada Baydhabo waxaaa eersaday Maxamed Siyaad Barre. Sida lala socdo, Maxamed Siyaad wuxuu qabsaday Baydhabo maalmo ka hor intaan ciidankii Caydiid watay eysan gelin Kenya isagoo Maxamed Siyaad markaas ka soo tegay gobolkii uu degaan ahaan ka soo jeeday, Gedo. Waxaa la mid ah sidaan Ilaah ka rajeynayo in Korneylkuna halkaas maridoono kaddib markuu Baydhabo qabsaday isagoo kasoo socdaalay geyiguu ka soo jeedo. Marka waa dhicikarta in shacabka Soomaaliyeed mar kale geliyaan Itoobiya ama Kenya.
Maxaa la gubdoon shacabka Puntland
Waxaan reer Puntland kula talinayaa ineynaan khaladkaas mar kale ku celin. Waxaan Soomaali u horseednay in qofkii ay qof is qabtaanba uu Itoobiya galo. Dambiga kaalmadey Itoobiya ka raadsadeen SNM, USC, SPM, Qanyare, Muuse Suudi, Maxamed-dheere, Yuusuf-dabogeed, Shaatiguduud, Aadan-madoobe iyo kuwo kale waxbaan ku leenahay ileyn innagaa jidkaas jideynaye. Waxaa intaas dheer, canshuurta laga qaado dekedda Boosaaso oo la rabay in shacabka wax loogu qabto waxay u xirneyd nimankaas. Mar waxaa kumannaan doolar laga siinjiray Shaatiguduud markuu Xuseen Caydiid la dagaalayey. Marna Muuse Suudi iyo Maxamed-dheere markey Cabdi-qaasin is hayeen. Waxaa mar Garoowe ka degay Cusmaan-caato iyo Xuseen Caydiid. Labadii sano oo Mbagathi la fadhiyey, dekedda Boosaaso iyagay u xirneyd. Markii dadkii reer Puntland ay islahaayeen korneylku hadduu Soomaali idin ka aadayaa oo canshuurtiinnu idiin baaqaneysaa ayaa taasi run noqonweyday. Ilaa hadda waxaa la sheegaa sida Cadde Muuse laga soo xigtay in lacagta ka soo xaroota Boosaaso, 80% la geeyo Baydhabo!
Marka maxaynu ka faa’iideynaa ninkaas iyo dowladdiisa. Ma sidii Fircoon buu ninku idin fududeystay markaasaad idinku iska dabogasheen? Sidee ku dhicikartaa in Cabdi Qeybdiid oo intaas oo dhib u geystay shacabkii Soomaaliyeed; bilo ka horna usoo dhigtay diinta Islaamka iyo dadkeeda in Gaalkacyo lagu soo dhoweeyo?
Baaq ku Socda Shacabka Puntland iyo Wiilasha Baydhabo la Keenay
Cabdi Qaybdiid oo Cabdullahi Yuusuf u Raacay Galkacyo... AKHRI....
Waajib baa idin ka saaran inaad maqashaan dadka caqliga leh. Waa in shacabku ogaadaan in diintaan Ilaahay iyo dadkeeda lala dagaalikarin. Waa in indhaha la furaa oo la fiirshaa meeshay ku dambeeyeen dagaaloogayaashi Xamar. Ma u maleyneysaan in dagaaloogaheennu ka kheyr badan yahay kuwaas jabay? Maya, WALLAAHI, dhulka innagaa Ilaahay uga khaliif ah. Waxaan markhaati ka nahay in isagu uu caan ka dhigay in badan oo ka mid ah markuu dhaqaale iyo masrax siyaasadeed siiyey. Waxaan shaki lahayn inuu is baray qaarkood iyo Zenawi. Waad aragtaan meesha dagaaloogayaal kale oon lahayn la mareen siyaasaddii Kismaayo. Waad aragteen halka qabiil kale oo aan isku hal wax ku qeybsanno ka dhigeen Gedo markay Xabashi ugu yeereen? Maxaa maanta halkaas yaal? Ma waxaad rabtaan inaad Boosaaso, Garoowe iyo Gaalkacyo ka dhigtaan Balad Xaawo, Luuq iyo Dooloow oo kale? Arrintaasi macquul maaha.
Horta wiilasha hubka ku heysta Bay iyo Bakool waa iney hubka kusoo ceshaan kacdoonka shacabka. Haddey la aadaan golaha maxkamadaha waxaa u furan in lacag xoogaaya laga siiyo tiknikada ay keenaan amaba ay ku biiraan maxkamadaha iyagoo hubkooda wata oo loo furidoono maxkamad. Waxaa kusoo biiraya oo madax u noqonaya culumadoodii Puntland jira ee ay kheyrka ku yaqaaneen. Marka waxaa idin ku waajib ah inaad luggoysaan ninkii idin soo luggooyey. Haddaad taladaas diidaan waxaad maraysaan meeshuu Cabdi Qeydiid maray.
Waxaa shacabka Puntland looga baahanyahay iney kacdoon sameeyaan sidii ay mar C/hi Boosaaso uga ceyrsheen. Ma ahan arrin nagu cusub. Waad aragteen ineysan jirin cid shacab iska celinkarta. Waxba yey idin khaldin dhowrka tikniko ooy wataan C/hi iyo Cadde. Taasi waxay dhabarjab ku noqodoontaa cadowga Itoobiya. Haddii reer Puntland iska xoreeyo nimankaas waxaan aamminsanahay inaan hadal dambe laga maqlidoonin Zenawi ileyn wuxuu hadda u heystaa inuu gacanta ku hayo Puntland. Waxaa Puntland sii xukumaya isla dadka degaanka u dhashay ee aad kheyrka ku taqaannaan. Keliya waxay la middoobaayaan golaha maxkamadaha inta Soomaaliya looga sameynayo madax. Waxaa idiin baaqanaya canshuurtiinna oo lagu horumarindoono adeega dadweynaha haddii Ilaah idmo. Hala kaftamee, wadaadada Koonfureed ood qaarkood ku sheegtaan iney dambiilayaal yihiin ayaa Xamar sidaas ka dhigaye marka ka warrama kuwiina ood ku sheegtaan ineysan cidna wax u dhimin? Miyeydaan arag sida Siilaanyo iyo Feysal Waraabe uga hadlay arrinta cuno-qabateynta hubka looga qaadayo Soomaaliya? Ogaada, xiriirka ay Itoobiya la leedahay Somaliland kama dhaco key Puntland la leedahay hadduusanba ka sidan. Marka macquul ma tahay siyaasiyiintii reer Somaliland oo saas u hadleysa in dadka reer Puntland ay u hogtaan dhibka C/hi soo wado?
Anigoo u hadlaya kacdoonka shacabka reer Puntland ayaan waxaan u sheegayaa C/hi iyo Cadde haddaysan dadweynaha faraha ka qaadin in meesha loogu imaandoono. Waxaan ku leeyahay sidii Nabi Suleymaan uu Balqiisa iyo qoomkeedii ku yiri. Soomaali ahaanna noqoneysa: Haddii boqorradu soo galaan magaalo wey baabi’iyaan; waxayna ka yeelaan dadkeeda laga dambeeyo kuwo dulli ah. Marka waxaa boqorro ah cidda Ilaahay taqaan oo ah shacabka Puntand. Haddii taladaas la diido, waxaa dhaceysa in labada askari laga jiido Puntland haddii Ilaah idmo.
Ma la joogaa waqti ay shacabka Puntland soo dhoweeyaan Cabdi Qeybdiid iyo wax la mid ah si hadda dib loo bilaabo meeshaan joognay 1990-kii? Waxaad meelaha ka maqleysaa reer Puntland oo leh sheekh hebel oo reer hebel ah ma rabno! War waxaan idin leeyahay ma jiro qof Soomaali ah oo reer Puntland u geystay waxa Cabdi Qeybdiid u geystay. Marka waxaad mooddaa in korneylku leeyahay: reer Puntlandoow, aniga waxaad iiga dambeysaan waa dilkaan idin dilo; marka waxaan maanta idiin hayaa niman horay idiin dilay marka waa inaad iyagana ka dambeysaan ood u uruurisaan lacag uu kula dagaalo qolada Cayr si aan Soomaaliya innagu ugu soo harno.
Marka arrinta Xabishadu waa mid kale. Daaya haku soo dhowaato Xamare. Ilaahay idinki waad arkidoontaan iyadoo laga furtay hubkey wadato. Markaas waxaa furmidoonta waddo lagu galo Jigjiga iyo Diradhaba.
Si Maxamed-dheere Jowhar loo Qaado waa in Cabdi Qeybdiid wax laga Qabtaa; Madaxtooyada Qarankana laga wareejiyaa Meleeshiyooyinka Haysta: